Ikhaya / izicelo / Ukunyusa ukunyusa / Ukutshisa ukutshisa ukutshisa i-transaxle yemoto
Udidi: Ukunyusa ukunyusa tags: iwelding preheat welding, ukwenza welding post, ukutyunjwa ukunyusa ukunyusa, Inkqubo yokufakwa kwentsimbi yangaphambi kwentsimbi, Ukufudumeza kwangaphambili, ukuqulunqa ukutshiza, ukuqhelisela ukufakwa kwezithuthi ngaphambili, Ukuchithwa kwe-weld preheating, ukufudumezela ukunyuka
Injongo: Ukucoca ubushushu obuyi-3.6 ”(91 mm) ngaphandle kwe-asi yentsimbi enobubanzi obunemigca emithathu ye-weld ukuya kuma-662 ºF (350 ºC) ngentambo nganye ye-weld ifudunyezwa kubushushu kwimizuzwana emihlanu.
Material: Umthengi unikezelwa nge-axle ye-OD yentsimbi engu-3.6 ”(91 mm)
Ukushisa: 662 ºF (350 ºC)
Ukuphindaphinda: 121 kHz
Izixhobo: I-DW-HF-45kW 50-150 kHz inkqubo yokufudumala yaxhotyiswa ngesikhululo sobushushu esikude esiqukethe ii-capacitors ezisibhozo ze-1.0 μF kuthotho olufanayo
- Indawo enye yangaphakathi i-coil coil yenzelwe kwaye yaphuhliswa ngokukodwa kule sicelo.
Inkqubo yokuThintela ukuThintela: I-axel yentsimbi yayipeyintwe ngobushushu obubonisa ipeyinti kunye ne-thermocouple incanyathiselwe kule ndawo. Ikhoyili yokufudumeza induction yafakwa ngaphakathi kwe-axel yesinyithi kwaye kwavulwa umbane. Le ndlela yenza ukuba umgca we-weld ufudunyezwe kuma-662 ºF (350 ºC) kwimizuzwana emihlanu njengoko kufunwa ngumthengi. Umbane uyakwazi ukucwangciswa ukuba ucime emva kwexesha lokufudumeza elifunekayo-imizuzwana emihlanu kule meko. Emva koko, iikhoyili inokushenxiselwa kumgca wesibini we-weld, kunye nomgca wesithathu we-weld.
Iziphumo / Inkqubo yeZibonelelo: Ukuba ikhoyili ingaphakathi kwe-asi, ayingeni, kwaye inokuhanjiswa ngokulula kumgca olandelayo we-weld
Isantya: Ukwenziwa kunye nenkqubo ecetywayo yenza ukuba imigca ye-weld ifudunyezwe kubushushu ngaphakathi kokujolise kuko
Uvavanyo lwasimahla lwelebhu: Le yiprojekthi entsha yomthengi, kunye nokuvavanywa kwesicelo seLebhu yeLebhu ye-HLQ kwenza ukuba umthengi akwazi
vavanya isicelo sabo kunye nendlela yokuyila eyiliweyo